Yintoni eNtsha kwi-AutoCAD Civil 3D 2009 -Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Yintoni entsha kwi-AutoCAD Civil 3D 2009
AutoCAD-AutoDeskUkufundisa i-CAD / GISZobunjineli
I-AutoDesk idlulisela isimemo kwisibonakaliso sento entsha ethi i-Civil 3D izise kuhlobo lwe-2009, zombini kwizisombululo zokucwangciswa kwedolophu nokwakha kunye nemisebenzi yoluntu.
Le ntetho iya kufakwa kwi-intanethi, kwaye simahla kwiyure enye ... kwaye eyona ilungileyo, ngeSpanish !!!
Kule nto kufuneka ukhethe i-webcast ekhoyo kwimeko:
Iindaba ze-AutoCAD Civil 3D 2009:
Ukuhamba, ukuhamba komhlaba kunye nemizobo emininzi
• Unyango kunye nokwenza lula kweendawo ezinkulu.
Ukuthuthwa kwezinto kunye nokulungiswa kwezinto
Iindawo zokulahla inkunkuma kunye neemoto zemboleko
Ingqungquthela yewebhu izakuba ngoLwesine we-26 kaJuni we-2008, kanye nje emva kwemini (12h ukuya kwi-13h), siyaqonda ukuba ixesha leSpeyin ukuze intaka ingahambi ungacela ukuba bathumele umyalezo omncinci kwiiyure ezimbalwa ngaphambili.
Ukuba unayo imibuzo ungaqhagamshelana iqela Call Centre (902 12 10 38) AutoDesk eSpain
Uqeqesho lweCadastre ePeru
Namhlanje iDownload Day
INDLELA NGOKUBHALISA NGAYO INKQUBO?
Ndiyoyika ke, ukuba akuyi kunceda kakhulu ukuba, njengokuba ndikholwa, uhlala elunxwemeni elisentshona Atlantic, uya kushiya ifowuni paste.
Ezi seshoni, njengeewebhu zewebhu zaseMelika, unokufikelela kuphela kwisandi ngomnxeba ... i-DRAW yokwenyani 🙁
Ndisuke rhoqo kwezi Internet ubomi, kodwa ngoku ungafumana kuphela ngaphandle iiseshoni kwenzeka emva kwezi kwaye sibe posteriori 🙄
UJulian Garzón B uthi:
Ndiyifumana inomdla kakhulu kwi-ONLINE yoqeqesho abaya kunika i-CIVIL 3D.
Ndiyabonga ngokubonelela le nkonzo
Amagama weProjekthi ye-AutoCAD 2010